Iflethi okanye indlu ekwicomplex yaseHerzliya Pituach enechibi, ngaselunxwemeni - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex yaseHerzliya Pituach enechibi, ngaselunxwemeni
Iflethi okanye indlu ekwicomplex entle ejonge ulwandle enepuli enkulu, ekwiHerzlia Pituach ekhethekileyo, uhamba ngemizuzwana ukusuka kolunye lwamalwandle amahle kwaSirayeli, yihotele iDan Accadia.
Iivenkile zekofu ezintle, iivenkile zokutyela kunye neevenkile zokuthenga ezikufutshane.
Ukuma kwebhasi ngaphandle kuya ngqo e-Tel Aviv.
Indlu ekwicomplex enamagumbi okulala ale mihla, negcinwe kakuhle eHerzlia Pituach, enye yezona ndawo zithandwa kakhulu kwaSirayeli. Le ndawo yokuqeshisa yeyalo lonke iflethi okanye indlu ekwicomplex. Esi sakhiwo sinomntu oncedisayo, kunye neelifti eziyi-2 ukuze kube lula ukungena kwiflethi okanye kwindlu ekwicomplex.
Iflethi yenziwe kakuhle, inokuthula, iyakhanya ibe ibethwa ngumoya, kwaye igumbi lokulala elikhulu linebhedi elala abantu ababini etofotofo kakhulu. Indawo yokuphumla ine-TV enkulu ene-cable TV, isofa enkulu netofotofo (nayo ipholile), kwaye kukho ikhitshi elihle, elinento yonke kunye nendawo yokutyela, kunye negumbi lokuhlambela elihle elineshawa.
Kukho i-Wi-Fi entle, ibhalkhoni enkulu enetafile nezitulo zaloo venkile yekofu yasekuseni kunye nendawo yokubuka ulwandle! Iindwendwe zinokonwabela ipuli enkulu yokuqubha.
Kukho Igumbi Lokuhlamba Iimpahla kwigumbi elingaphantsi, apho iindwendwe zethu zamkelekile ukuba zilisebenzise.
Iflethi uhamba nje umzuzu oyi-1 ukuya elunxwemeni, kwaye ikufutshane kakhulu nehotele iDan Accadia. Umgama wokuhamba ukuya kwiziko leevenkile zale mihla e-Herzlia Marina. Iivenkile zokutyela ezininzi ezintle kunye neevenkile zekofu ezikufuphi. Ivenkile enkulu kunye neevenkile zasekuhlaleni kwisikwere esecaleni kweflethi okanye indlu ekwicomplex. Indawo Yokupaka Simahla iyafumaneka esitratweni. Kukho izithuthi zikawonke-wonke ngaphandle kweflethi ukuya e-Tel Aviv, kwi-Dizengoff Shopping Centre, kwiMarike yeCarmel edumileyo, kunye neHerzlia Town.
IHerzlia yenye yezona ndawo zintle, zikhethekileyo nezipholileyo kwaSirayeli. Iflethi ngokwayo luhambo oluyi-1 ukusuka elunxwemeni lwe-Accadia. Ukuhamba imizuzu eyi-5 ukusuka kwivenkile enkulu, kunye nemizuzu eyi-10 ukusuka e-Herzlia Marina kunye neevenkile zokutyela kunye neevenkile ezinkulu zokuthenga. Zininzi iivenkile zokutyela, iibhari neevenkile zokutyela elunxwemeni.
Jonga apha ukuze ufumane iinkcukacha nge-Accadia Beach: https://foursquare.com/v/accadia-beach-- % D7% 97% D7% 95% D7% A3-% D7% 90% D7% 9B % D7% 93% D7% 99% D7% 99% D7% 94/4bef9a8396edc9b611f74af2
Siza kuqhagamshelana nawe nge-imeyile okanye inombolo yefowuni yasekuhlaleni.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Herzliyya